DLULA I-Antonov AN-225 PAX FSX - Rikoooo
Usayizi 27.1 MB
Play 70 387
Umbhali: Thomas Ruth, ulungiswa ngu-ricardo_tv
I izindiza ende futhi ishisa kakhulu emhlabeni aphinde on Rikoooo inguqulo nomgibeli (fictitious) yayihlanganisa nezinkampani: Air France, American Airlines, British Airways, Lufthansa, upende omhlophe nomakhi upende (Antonov).
I Antonov An-225 Mriya ( "The Dream" ngesi-Ukraine) iyinhlangano iqhumisa ezokuthutha ndiza, okuyinto wawenziwe ngo Ukraine Soviet Socialist Republic saqanjwa ikhodi NATO "Cossack" (An-124 kwaba nenkulumo ethi "Condor" ). Lokhu indiza yobukhulu ezihlaba umxhwele olukwazi imithwalo emikhulu kanye esindayo phezu amabanga amade. Lona ndiza ende futhi ishisa kakhulu emhlabeni, kodwa wesibili mayelana esikalini, ngemuva ngendiza giant H-4 Hercules.
Ngokusho Anatoly Boulanenko, lo An-225 iye yasetshenziswa akakaze ukuze amandla ayo egcwele futhi, aphinde ngokusho kwakhe, lo An-225 Kunjengoba ezikwazi empini. Ngempela, ngesikhathi ukubonakaliswa phezu at Le Bourget, yena ebeligciniwe engela of 45 ° ne mkhathi Buran of 62 amathani exhunywe fuselage.